Sida loo sii qulquli Music ka Mac si iPhone la Lugood
> Resource > Mac > Sida loo sii qulquli Music ka Mac si iPhone
Ka dib markii hoorto music ka Mac si iPhone la Lugood, ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah heesaha aad iPhone oo aan ka jirin on Lugood yihiin tirtirayaa? Tani waa sida Lugood shaqeeyaa. Waxaa hayaa music aad ku Mac beehsa aad iPhone. Haddii aad goolka ama lagala soo bixi qaar ka mid ah heesaha aad iPhone, tahay mid aad u badan tahay in iyaga laga badiyo halka hoorto music ka Mac si iPhone la Lugood aad. Mid ka mid ah habka si looga fogaado dhibaato waa in ay isku dayaan Wondershare TunesGo (Mac) si qulquli music si toos ah uga Mac in iPhone. Markaasaa kaliya ee 3 tallaabo, waxaadna ku gaari doonaa goolka.
Click Download to download Wondershare TunesGo (Mac) file rakibo oo ku xidh on your computer Mac. Waxaa si fiican u la shaqeeyaan kombiyuutarada Mac taas oo ku salaysan yihiin Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10 iyo 10.11.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay PC Windows ah, fadlan kala soo bixi Wondershare TunesGo , version Windows ah, in ay ka PC wareejiyo music inay iPhone .
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan iPhone la Mac computer iyo double-riix bilowga icon degdeg ah on desktop-ka in aan bilowno Wondershare TunesGo (Mac). App iPhone Tani waxay ogaan doonaa iPhone si toos ah iyo muujiyaan ay info uu furmo suuqa laga bilaabo.
Tallaabada 3. Stream audio ka Mac si iPhone
In uu furmo suuqa laga bilaabo, guji Music on column ka tagay. Markaas uu furmo suuqa cusub, waxaad ka arki kartaa icon ah "Add" on sare ee daaqadda. Waxaa Click to your computer dhirtuba u music in aad rabto in aad sii qulquli si iPhone. Dooro music loo baahan yahay oo guji "Open". Markaas Wondershare TunesGo (Mac) wuxuu bilaabaa inuu sii qulquli music ka Mac si aad iPhone.
Wondershare TunesGo (Mac) waxay kuu ogolaanaysaa inaad sii qulquli music inay iPhone aan wax overwritten aad iPhone. Iyadoo app this, aad qulquli karaan music si gaar ah iPhone, iPad, iPod ama xataa taabashada 4 iyo iPod xiriiri 5 ku salaysan arrimo 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9. Waxa intaas dheer, haddii aad leedahay qaar ka mid ah heesaha oo kaliya on your iPhone, aad xitaa isticmaali kartaa app iPhone si wareejiyo Lugood ama computer. Wondershare TunesGo (Mac) noloshaada mobile inta badan ka sahlan oo si fiican u dhigaysa.
Daawo Video si ay u sii qulquli Music ka Mac ah in iPhone ah
Isku day Wondershare TunesGo (Mac) si qulquli music ka Mac si iPhone hadda!